Thenga inombolo yefowuni yokuqinisekisa isms
Fumana imiyalezo yeSMS
ukubhalisa nakweyiphi na iisayithi
Nxibelelana nathi Ngena
Iifowuni zexeshana zokufumana iSMS
Fumana imiyalezo yeSMS ukuze ubhalise nakwesiphi isiza
Inombolo yefowuni eyiyo yesms
Thenga inombolo yee-sms Faka i-imeyile yokwenyani, yenza iakhawunti
kwaye ufumane inombolo yokuvula ye-SMS.
Ufuna ukubhalisa iakhawunti kodwa isiza sifuna
Inkonzo yethu iya kukubonelela ngenombolo yefowuni ukugqitha ukuqinisekiswa kweSMS . Ungayisebenzisa ukufumana iSMS enekhowudi yokuqinisekisa.
Umbhalo onekhowudi yokuqinisekisa uya kuthunyelwa kwinombolo oyikhethileyo kwaye iya kubonakala kwiakhawunti yakho kwindawo yethu.
Ngoku ungakuphepha ukusebenzisa inombolo yakho yokwenza iiakhawunti okanye ukubhalisa kwiiwebhusayithi.
Amanani aqeshiweyo aya kukunceda uqinisekise nakweyiphi na isayithi okanye inkonzo. Fumana imiyalezo yeSMS kwi-intanethi kwimizuzu nje eyi-1.
80 + amazwe ayafumaneka kwinkonzo yethu ukufumana iinombolo ezivela eJamani, eUSA, eRashiya, China, Indonesia, Japan, France, nangaphezulu. Kwixesha elizayo, amazwe angaqhelekanga aya kongezelelwa ukurenta amanani abonakalayo.
Inombolo yomnxeba yemizuzu engama-20
Uhlawula kuphela imiyalezo engenayo. Ngeli xesha inani elingenamkhawulo lemiyalezo yeSMS inokuthunyelwa kwinombolo ekhethiweyo.
Amanani anokusetyenziselwa ukwenza ukuba zonke iinkonzo zidweliswe kule ndawo. Khetha enye oyifunayo kwaye ufumane isiqinisekiso seSMS kwinombolo yakho ekwi-intanethi. Emva koko khuphela ikhowudi yeSMS kwaye uyincamathisele kumgca ofanelekileyo xa ubhalisa iakhawunti yakho.
Dibanisa iiapps zakho, fumana iinombolo zemiyalezo yeSMS. Fumana amawaka eSMS ngomzuzu kwaye ubhalise iiakhawunti ngemizuzwana! Sebenzisa i-SDK yethu ukudibanisa ngokukhawuleza nangokulula kunye ne-API yethu efundwayo.
Sebenzisa iinombolo zethu ukukhusela imfihlo yakho - musa ukuyikhupha eyakho.
Sukuvumela iinkampani ukuba zithengise kwakhona ngeenkcukacha zakho.
Ukubethela okunamandla kuzo zonke iiseshoni ezikwi-intanethi.
Sebenzisa inombolo yethutyana kulo naluphi na ubhaliso
I-SMSVERIFY ilungile ukubhalisa:
Umsebenzisi unokuqinisekisa yonke inethiwekhi yoluntu njengokuthanda
I-Facebook, i-Instagram, iTwitter, iTumblr, uGoogle + kunye nezinye iinethiwekhi zokunxibelelana.
Iiakhawunti kwindawo yentengiso
Izilwanyana zasendle, Tmall, Rakuten
Umnxeba, WhatsApp, Viber, WeChat,
Facebook, Snapchat, Skype, Line, Tencent, QQ kunye nezinye.
Imeyile kunye neeakhawunti
Sinikezela ukuqinisekisa (iGmail, ilizwi likaGoogle,
iakhawunti yeMicrosoft, imeyile ye-Yahoo) Fumana imiyalezo yeSMS yazo naziphi na iisayithi kunye neenkonzo
Isebenza njani le nto?
Sisebenza nabaphethe izithuthi zesizwe ukubonelela ukufikelela kwinombolo yefowuni yaseMelika esebenzayo. Ngenkonzo yethu, ungacela ukufikelela kwinombolo yefowuni kwaye usebenzise inombolo ukufumana imiyalezo yeSMS.
Imiyalezo eya kuthunyelwa kwiakhawunti yakho ngqo kwindawo yethu.
Ngaba amanani akho ayinyani?
Ewe, ezi ziinombolo zeselfowuni. Aziyonyani kwaye zinokusetyenziselwa ukuqinisekisa malunga nayo nayiphi na inkonzo, iqonga okanye indawo usebenzisa isicatshulwa okanye ukungqinisisa umnxeba. Sisebenza nabanikezeli beefowuni eziphathwayo ukuze ukwazi ukucela ukufikelela kwiinombolo zeefowuni zokwenyani ukuze ufumane imiyalezo yeSMS. Imiyalezo iya kusiwa kwiakhawunti yakho ngokuthe ngqo kwindawo yethu.
Iindleko zeSMS efunyenweyo ziqala kwi $ 0.01. Ungafumana inombolo mahala.
Unamanani amaninzi? (Ngaba zahlukile? Ngaba abanye abasebenzisi bafumana inani elifanayo endilisebenzisayo?)
Inombolo uyabelwe wena kuphela. Asithengisi ngenani elifanayo kabini.
Ndingayisebenzisa njani inombolo yefowuni yokwenyani ukufumana imiyalezo yeSMS kwi-intanethi?
Ukufumana iSMS kwinombolo yefowuni ebonakalayo kwinkonzo yethu kuya kufuneka:
Khetha ilizwe kuluhlu olufumanekayo kwisiza.
Khetha iselfowuni (ukuba ibalulekile kuwe)
Khetha indawo okanye inkonzo apho ufuna ukuvula iakhawunti.
Emva koko khuphela inombolo uze uyisebenzise ukufumana imiyalezo ye-SMS evela kwindawo ekhethiweyo.
Kwimizuzu embalwa, uyakufumana isicatshulwa okanye ikhowudi yeSMS kwiphepha elihambelana nenkonzo yethu yeSMS.
Ngoku uyazi ukuba ungayifumana njani imiyalezo yeSMS ngaphandle kwefowuni ngokusebenzisa iinombolo zefowuni eziqeshisayo zethutyana.
smsVERIFY.PRO Yenziwe nge eRashiya
Ilungelo lokushicilela © 2020 SmsVerify. Onke Amalungelo Agciniwe.
Nceda usincede senze inkonzo ibe ngcono. Nceda uxele naziphi na iimpazamo ezifunyenweyo kuguqulelo kwi-imeyile yethu: smsverify.pro@gmail.com